မောင့် သ ဘော တဲ့ – Hlataw.com
“မောင်တော်တော့နော် ကားထဲမှာ ကွာ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူးအသက်ရှု လည်းကြပ် တယ်..မောင်ရဲ့”လွှတ်ဖူးကွာနမ်းလို့မဝသေးဘူး ဗျတော်တော့ နော်မောင်အိမ်ပြန်နောက်ကျမယ်…နောက်ရက်တွေရှိသေးတယ်ကွာ..။ ဟုတ် မမ..။ အဲ့နေ့က ဆိုင်ကို နောက်ကျမှ ပြန်ရောက်လာတယ်..မမကားပေါ်က လေလေးတချွန်ချွန်နဲ့ပစ္စည်းထုပ်တွေ ဆွဲပြီးဆင်းလာတဲ့ ကျနော့်ကို သက်မောင်က မျက်မှောက်ကုတ်ပြီးကြည့်တော့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ခန်းထဲတန်းဝင်ခဲ့တယ်…အဲ့နေညက တစ်ညလုံး မမအကြောင်းတွေးပြီး အာရုဏ်တက်လောက်မှ အိပ်ပျော်သွားတယ်..။ သုတ ငါအိမ်ကို ခနပြန်မယ်…မေမေနေမကောင်းလို့..။ အေးပြန်လေ..သက်မောင်အန်တီနေမကောင်းဘူးဆို မင်းအေးဆေးမှ ပြန်လာခဲ့..ဟုတ်ပြီလား။
ဒီလိုနဲ့သက်မောင်လည်းမြို့ကို ပြန်သွားတော့ဆိုင်မှာ တစ်ယောက်တည်းကြီးကြပ်နေရချိန်မမနဲ့တောင်အပြင်ထွက်ဖို့မအားတဲ့အခြေနေမျိုးရောက်သွားရတယ်။ ဖုန်းကတော့ပြောဖြစ်ပေမယ့် အပြင်အတူလျှောက်လည်ဖို့တောင် ဒီရက်ပိုင်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း “မမကို”ရှင်းပြထားရတယ် ညနေ…ဆိုင်ပိတ်ချိ်လောက်ကျတော့မမ ဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်..လက်ထဲမှာလည် ငါးဆင့်ချိုင့်(စတီးလ်)လေးကိုဆွဲလာပြီး ကျနော့် နားရောက်တော့ “မောင် ပင်ပန်းနေပြီးလား” ညစာ စားဖို့ အသင့်ယူလာတယ်..မောင်နဲ့အတူ ညစာစားမယ်..။ “ညစာ”ဟုတ်လား မမ ဟင်…အင်းညစာလေ ဘာဖြစ်ဟာ..မောင်နော် ညစာဆိုတာ ထမင်းတူစားမယ်လို့ပြောတာ……လျှောက်တွေးမနေနဲ့…ဟွင်းး မမနဲ့အတူ ညစာစားပြီးတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲ ကျနော်ဝယ်ထားတဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီးလေးတွေကို ဖျော်စက်ထဲ နွားနို့်စိမ်းလေးထည့်ဖျော်ပြီး မစ်ရှိတ်လေးလုပ်ပေးတယ်..
“မောင် သောက်ကြည့်”လိုတာ ထပ်ပြောသောက်ကြည့်လိုက်တော့ အရသာက ကွက်တိ..”မမတော်တယ်ဗျာ…အာဘွားးပြွတ်စ့်” မပြောမဆို မမနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ရုတ်တရက်နမ်းလိုက်တော့ မမက အလိုက်သင့်လေးပြန်နမ်းတယ်..။ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို အသာလေးပြန်နမ်းပြီးကျနော့်ကိုသိုင်းဖက်လာတယ်။ “မမ အရမ်းချစ်တယ်ဗျာ” “မောင်ကို လည်း သိပ်ချစ်တယ်ရှင့်” မောင်တို့ အခန်းထဲ ခနသွားမယ်..”နော်မမ”မမက ကျနော့်ကို ရီဝေဝေလေးကြည့်ပြီး “အင်း မောင့်သဘောတဲ့” “မမကိုယ်လုံးလေးကို စွေ့ခနဲပွေ့”လိုက်တော့ ဟာ..မောင်ကလည်း…ဆိုပြီး ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲကို မျက်နှာဝှက် ဖိကပ်ထားတယ်..။
“မမကိုယ်လုံးလေး ကို ကုတင်ထက်”အသာလေးတင်ပေးပြီး ကျနော်က မတ်တပ်ရပ်အနေထားလေးတိုင်း…မမနဖူးလေးကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးလေး ထပ်နမ်းလိုက်တယ်ကျနော့် ခါးလေးကိုဖက်ထားပြီး…. “မောင်ရယ်”မောင်နားမှာနေနေရတဲ့အချိန်လေးတွေကအရမ်းကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့လေ ရင်တွေလည်း အရမ်းခုန်တယ်ရှင့်..သိရဲ့လား? ဟုတ်…ပိုပြီးရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ အချိန်တွေက ခုမှ လာမှာ”မမရဲ့”ဆိုပြီး…မမနှာခေါင်းလေးကို အသာလေးဖိညှစ်လိုက်တော့ “မောင်နော်တဲ့” မမ….မောင်တို့်ချစ်ကမ္ဘာလေးတစ်ခုဖန်တီးရအောင်ကွာ.အဲ့ကမ္ဘာလေးထဲကို မောင်နဲ့အတူ ဒီည ခနလိုက်နေရမယ်..။ “အွင်း..မောင်..မောင့်အလိုကျပါ..ရှင်”
မမဆီကခွင့်ပြုချက်ရတော့မမကိုယ်ပေါ်ကရင်ဖုံးကြယ်သီးသုံးလုံးနဲ့အင်ကျီအပျော့လေးကို အသာလေး ချွတ်လိုက်တော့…ပန်းနုရောင်ဇာပါးလေးတွေ အနားကွပ်ထားတဲ့ ဘရာလေးကြားက ရွှေရင်အစုံ မို့်အစ်အစ်လေးတွေက ကျနော့်ရင်ကို “ဆောင့်ခုန်”စေတယ်….ဘရာလေးကို ဆက်မချွတ်ပဲ အောက်က ဝတ်ထားတဲ့ “စကပ်ဘေးခွဲကုိယ်ကြပ်”လေးကို အသာလေး ချွတ်ပေးတော့ မမက မျက်လုံးလေးတွေစုံမှိတ်ထားပြီး ကျနော့် လက်အစုံကို ဟန့်တားလာတယ်..။ ရှက်မနေနဲ့တော့…မမရာ..မောင့်ကို ခွင့်ပြုပေးနော်…။ ကျနော့်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကြောင့် မမကသူမလက်တွေကို ဟန့်တားမနေပဲ လိုက်လျောပေးလိုက်တယ်…။
မမထမီလေးကိုအသာလေးချွတ်ချလိုက်တော့ပန်းနုရောင်ပင်တီလေးကြားက မမရဲ့ပန်း(ပိပိ)လေးကဖောင်းအိအိလေးကျနော့်မျက်ဝန်းအစုံထိုနေရာလေးမှာစက္ကန့်၂၀လောက် သတိလစ် ငေးမောနေမိတယ်..။ “မောင်ရေ..အဲ့လောက်မကြည့်နဲ့ကွာ” မမခြေထောက်တွေ မြှောက်ထားပေး..မမက ခြေထောက်လေးတွေကို အလိုက်သင့်မြှောက်ပေးတော့ ပင်တီလေးကို လိပ်ယူပြီးအသာလေးချွတ်ကုတင်ခြေရင်းမှာပုံထားလိုက်တယ်။အကာကွယ်မဲ့သွားတဲ့မမပေါင်ကြားထဲက ပန်းလေးကို ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ကြည့်လိုက်တော့…ရိတ်ပြီးကာစ ပြန်ထွက်လာတဲ့ အမွှေးနုရေးရေးလေးတွေနဲ့ ဆီးခုံးမို့မို့လေးက သွေးကြော စိမ်းစိမ်းလေးတွေပန်းရောင်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေပြီးတော့စိတော့မလိုဟတော့မတက် အကွဲကြောင်းလေးတွေက ကျနော့်ရင်အစုံကို “ဝုန်းဒိုင်းကြဲ “စေတယ်..။ ကုတင်ထက်တက် မမခြေရင်းမှာနေရာယူလိုက်ပြီး..ပေါင်လေးတွေဟပေး ကွာ မမရာ ဆိုတော့…”မောင် ဘာလုပ်မလို့လဲတဲ့” မမရဲ့ ပန်းလေးကို နမ်းမို့်လို့ဗျ.. နမ်းခွင့်ပေးနော်…… ဟင့်အင်း…မမခွင့်မပြုဘူး..ဘုန်းကံတွေနိမ့်ကုန်မယ် မောင်ရယ်….။
မနမ်းရဘူးနော်ဟောဗျာဘယ်သူပြောလဲ?ဘုန်းကံနိမ့်မယ်လို့.အဲ့တာရှေးအယူဆတွေပါကွာ..မောင်နမ်းပါရစေလို့ထပ်ဂျစ်တိုက်လိုက်တော့”သွားးလူဆိုးလေး..ဒါမျိုးကျတက်နေလိုက်တာ”ကဲပါ..ရှင်လေးသဘော..။ မမပေါင်ကြားလေးကို အသာလေးတိုးဝင်ပြီး မမပိပိလေးကို နှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့ ဖိကပ်လိုက်တယ်…”ပြွတ်စ်..ပြွတ်စ်..ပြွတ်စ်””အိုး..မောင်ရယ်”အကွဲကြောင်းလေးကိုလျှာဖျားလေးနဲ့ဖွကလိပြီးအစိလေးကိုလက်မနဲ့ဖိပေးလိုက်တော့….အင်းး..ဟင်းး…အင်းးမောင်ရာဖျားတက်နေတဲ့ လူနာညည်းသံလေးလို တအင်းအင်းညည်းပြီး ဝတ်ရည်ကြည်လေးတွေ စိုတက်လာတယ်….
ပိပိလေးလည်းပုံမှန်ထက် နည်းနည်းလေးမို့လာတယ်.. ပေါင်ရင်းသားလေးတွေကို မနာအောင်ဖိကိုက်ပေးလိုက်တော့… “အားး.အား….မောင်ရာ ဘာတွေလုပ်နေလဲ” ဒီမှာ ရင်ခုန်ရလွန်းလို့.. အသက်ရှူရပ်တော့မယ်… ကျနော့် လက်အစုံနဲ့ အကွဲကြားလေးကို အသာလေးဖြဲပြီး လျှာဖျားလေးနဲ့ အတွင်းသားလေးတွေကို ကပ်မွှေပေးလိုက်တော့ အရည်ကြည်တွေ ယိုစိမ့်လာလို့ အသာလေးခွာပြီး အစိလေးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ဖိစုပ်ပေးလိုက်တယ်….။မမတကိုယ်လုံးဆတ်ဆတ်ခါပြီးဝတ်ရည်ကြည်တွေအပြင်ပျစ်ချွဲချွဲအရည်လေးတွေပါ ပန်းထွက်လာတယ်…။ “ဟူးးမောင်ရယ်” နွမ်းလျဟန်နဲ့ ပါးစပ်လေးဟပြီးအမောဖြေနေတဲ့မမကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးလေးကြည့်နေ မိတယ်…။
ခဏနော်မမကျနော်ရေခဲသေတ္တာထဲကစတော်ဘယ်ရီလက်ကျန်သုံးလေးလောက်ယူပြီးဓားနဲ့ထက်ခြမ်းစိပ်ပန်ကန်လေးထဲထည့်ပြီးမမဆီပြန်လာခဲ့တယ်။ “မမ အမောပြေပြီလား” ဟင့်အင်းကွာ…ရင်တွေ တုန်ပြီး မောနေတုန်းပဲ…အဲ့တာ မောင့်ကြောင့် “အင်းပါ..ဗျ..မောင့်ကြောင့်ပါ” မမနို့လေးတွေကို နမ်းချင်တယ်… ဟင့်အင်း မနမ်းရပါဘူး… ခပ်မူမူလေး ငြင်းနေတဲ့ မမကိုအသဲယားပြီးမမရဲ့ဘယ်ဘက်နို့လုံးလုံးလေးကို နမ်းလိုက်တယ်….”ပြွတ်စ့်” “အင်းးအား..မောင်ရာ” ကျနော်လေ စောက စိပ်ယူလာတဲ့ စတော်ဘယ်ရီ ခြမ်းလေးတွေကို မမရင်နှစ်မွှာပေါ်အသာလေးပွတ်တိုက်ပြီး အရည်လေးတွေ ညှစ်ထုတ်လိုက်တယ်…ပြီးတော့ မမဗိုက်သားပြင်လေးတွေ ကနေ ချက်ပေါက်လေးထဲ အထိ ရည်လေးတွေညှစ် အသီးခြမ်းလေးနဲ့ ပွတ်ဆွဲလိုက်တယ်.။
ပိပိလေးကိုတော့ နမ်းပြီးသားဆိုတော့ အဲ့နေရာလေးကို လျှော်ပေးလိုက်တယ်..ပြီးတော့ စတော်ဘယ်ရီအရည်လေးတွေ အကွဲကြား ကတဆင့် အထဲဝင်သွားပြီး တခုခုဖြစ်မှာလည်း စိုးရိမ်တယ်လေ…။ “မောင် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ” မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေကွာ…”မောင်နော်” စတော်ဘယ်ရီကို လက်စသက်ပြီး..မမရဲ့နို့လုံးလုံးလေးကို စို့်ယူလိုက်တယ်..စတော်ဘယ်ရီနံ့လေးရယ် အရသာလေးရယ် ပြီးတော့ မမနို့သီးခေါင်းလေးတွေရဲ့အထိတွေ့ကြောင့် စောထဲက မတ်နေတဲ့ ကျနော့် ၆လက်မခွဲလောက်ရှိတဲ့ ညီတော်မောင်က ထောင်မတ်ပြီး (ဗစ်)ကြားက ရုန်း ကန်နေပြီလေ…။ မမနို့လေးတွေကို နမ်းစုပ်ရင်းကျနော့်လီးကမမပိလေးကိုဖိထောက်လာတော့။
မောင်ရယ်..မောင်ရာ.ကွာ…မမထဲကိုမောင့်ဟာကြီးထည့်ပေးပါကွာ….(နော်မောင်)မမရဲ့တောင်းဆိုလာမှုကို မလိုက်လျောပဲ “မောင်နမ်းလို့ မဝသေးဘူးကွာလို့”ဆိုတော့ “ဟာ မောင်ကလည်း ဒီမှာ ထပ်ထွက်ကုန်တော့မယ်ရှင့်” “မမရဲ့ နို့လေးတွေကို ဘယ်ညာနမ်းစုပ်ပြီး” ဗိုက်ပြင် ချပ်ချပ်လေးကနေ တရွေ့ရွေ့နမ်းလာပြီး..ချက်ပေါက်လေးဆီကိုနှုတ်ခမ်းတွေ ရွေ့လိုက်တယ်….။ အိုး..စတော်ဘယ်ရီအရည်လေးတွေကမမချက်နက်နက်လေးပြည့်နေအောင် နေရာယူထားတော့နှုတ်ခမ်းအစုံနဲ့ဖိစုပ်ပြီးလျှာဖျားလေးနဲ့ဝင်သ၍ထိုးကလိလိုက်တော့… ကျနော့် ဆံပင်တွေကို ထိုးဖွပြီး မမတကိုယ်လုံး ကော့တက်လာတယ်..။
“မောင်ရာ…အီးး…အရမ်းရင်တွေ ခုန်တယ်”ထည့်ပေးပါတော့နော်…မမထဲကို “ဟုတ်..မမ” မမကိုယ်လေးပေါ်ကအသာလေးခွာပြီးကျနော့်တီရှပ်လေးကိုအရင်ဆုံးချွတ်လိုက်တယ်..ပြီးတော့ မတ်တပ်ရပ်ပီး မာန်ဖီနေတဲ့ ညီတော်မောင်ကို လွှတ်ပေးဖို့ ကျနော့်(ဗစ်)ကို ချွတ်ချလိုက်တော့…. “ဟာ..မောင်ရာ..ထွားပြီးတော့ ရှည်လိုက်တာ ဆန့်ပ့မလားကွာ” ကျနော့်ပေါင်ကြားကို ကြည့်ပြီး အလန့်တကြား ပြောလာတော့… မဆန့်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး မမရ..မကြာခင်သိပါလိမ့်မယ်ဗျ ဆိုပြီး မမကိုယ်ပေါ်ကိုအသာလေးခွပြီး နေရာ ယူလိုက်တယ်…။
ပြီးတော့….ရင်ချင်းအပ် ဆီးခုံချင်ထိထားပြီးကျနော့် လီးကို မမပိလေးရဲ့ အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်တယ်.. ထောင်မတ်နေတဲ့ လီးတန်ကြီးရဲ့ ပွင့်အာနေတဲ့ဒစ်ဖူးကြီးကို အစိလေးကို ဖိပြီး ပွတ်ပေးလိုက်တော့…. “ဟအားး..အ့…မောင်ရာ” ရူးချင်ပြီ…ရှင်လေးရာ…သေမတက်ပဲကွာသွင်းလိုက်ပါတော့နော်…”မမကို မနှိပ်စက်ပါနဲ့မောင်ရာ” ကျနော်လည်း ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ မမပိလေးကြားထဲ ကျနော့်လီးကို တေ့ပြီး အသာလေးထည့်လိုက်တယ်…စေးပိုင်ပိုင်လေးတိုးဝင်ကာ..တစ်လက်မလောက်အရောက်ရပ်လိုက်တော့… “မောင်…မောင့်ဟာကြီး အတင်းတိုးဝင်နေတယ်”ခံရခက်တယ်ကွာ “အားးအ့..အား”ဆက်သွင်းပေးနော်…မောင်ကျနော်လည်း အသာလေးတစ်လက်မလောက်ဆက်သွင်းလိုက်တော့…တကယ့်ကိုပြော မပြတက်တဲ့ ဖီလင်ပါဗျာ..ကြပ်ပြီးစေးနေတဲ့ ဖီလင်..အတွင်းသားတွေရဲ့ အထိအတွေ့…အိုး..ပြောမပြတက်တဲ့ ဖီလင်ပေါင်းစုံနဲ့ တုံ့ဆိုင်းမနေတော့ပဲ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး လီးတံ တဆုံးဖိချပေးလိုက်တော့…. “အိုး…မောင်ရာသေပြီရှင့်” အရမ်းပဲကွာ..ပြန်ထုတ်ပေး နာတယ်..။ မမ တားဆီးမှုတွေ ဂရုမစိုက်တော့ပဲအသွင်းအထုတ်ခပ်ပြင်းပြင်းတွေနဲ့သွက် သွက်လေးဆောင့်ပေးလိုက်တယ်.. “မောင်ရာ…အင်းးဟင်း…အား” မောင့်ကျောပြင်ကို လက်သည်းတွေနဲ့ခြစ်ပြီကွာ..အားအရမ်းကောင်းနေပြီ..။
ကျနော့်ကျောနဲ့လက်ပြင်ကုတ်ခြစ်နေတဲ့မမလက်သည်းတွေရဲ့အထိတွေ့ကြောင့်စိတ်တွေ ပိုကြွလာပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးအချက်နှစ်ဆယ်လောက် မနားတမ်းဆောင့်ရင်းအစိလေးကိုပါဘယ်လက်လေးနဲ့ပွတ်ချေပေးလိုက်တယ်။ “မောင်ရေ..ဆောင့်..အိုး..ဘယ်လိုကြီးမှန်း သိဘူး..ဆီသွားချင်လာသလိုပဲ” “အားးအားအား..အင်းးဟင်းမောင်ရာ” ကျနော်လည်း ဆောင့်ချက်တွေ ထပ်မြန် ပေးလိုက်တော့… “အိုး..မောင်ရာ..မရတော့ဘူး..အား” အားအားဆိုပြီးမမကိုယ်လုံးလေးကော့လူးနေရာကနေခြေဖျားလေးတွေတဆတ်ဆတ်တုန်ပြီးငြိမ်သွားတော့.. ကျနော့် လည်း ထိန်းမထားတော့ပဲ လေးငါးချက်လောက် ဆောင့်ပြီး အရည်တွေပန်းချလိုက်တယ်…။
“အား…အ့..မမရာ”အရမ်းမိုက်တယ်ကွာ “မောင့်အရည်နွေးနွေးလေးတွေ ကျမ ပ်ိလေးထဲ အရှ်ိန်နဲ့ဝင်လာတော့ကျမလေဆတ်ခနဲတုန်ပြီးဒုတိယအကြိမ်အရည်တွေကိုပန်းထုတ်မိလိုက်တယ် မောင်ရယ်…အရမ်းချစ်တယ်ကွာဆိုပြီးချွေးစလေးတွေ စို့နေတဲ့ မောင့်နဖူးလေးကိုမောင့်လည်ပင်ကို ခိုကာနမ်းလိုက်တော့.. “မမရာ…မောင်လေ မမကိုအရူးမူးချစ်မိသွားပြီဗျာ.” မောင့်နှုတ်ဖျားကမဟုတ်ပဲ မောင့်ရင်ထဲကလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ထွက်လာတဲ့ မောင့်ချစ်ခြင်းတွေကို သိလိုက်တော့…. ကျမလေ…ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျမလောက်ပျော်နေမယ့်သူ မရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စွာ တွေးမိလိုက်သေးတယ်။အဲ့နေညကမောင်ကအမောပြေတော့နောက်တစ်ခါ..အချစ်နိဗ္ဗာန်လေးဆီကို ထပ်မံခေါ်ဆောင်သွားသေးတယ်..။ ကျမလေး မောပန်းနွမ်းလျပြီး အိမ်ပြန်တော့ ကျမပေါင်လေးတွေကွတတဖြစ်သွားတဲ့အထိ..မောင့်အချစ်တွေကိုမိန့်မိန့်မူးမူး…ခံယူမိလိုက်တော့တာပဲ..ရှင်…